Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh’Midnimada Somali iyo Somaliland meel walba waan u maraynaa” | Salaan Media
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh’Midnimada Somali iyo Somaliland meel walba waan u maraynaa”
Arbaco, Juun 26, 2013 (SM) — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inay Xukumada Somaliland u sameynayaan wax walba oo la awoodi karo oo tanaasul ah si loo helo Soomaaliya oo mid ah, kaddib hadal uu ka jeediyay munaasabad lagu maamuusayay 26-ka Juun oo xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
“Waxaan diyaar u nahay inaan aan la nimaadno wax idinka dhaqa oo idnka daaweeyaa waxaad tabanaysaan. Waxaan doonaynaa in idinkuna aad noo dabacsanaataan oo wixii shalay dhacay sidii aanay u soo noqon lahayn aan uga shaqeynno,” ayuu madaxweynuhu ku sheegay khudbad uu jeediyay.
Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in wadahadallada u socda Soomaaliya iyo Somaliland ay sii wadi doonaan, isagoo sheegay inay ka shaqeynayaan sidii wadahadalladaas ay u noqon lahaayeen kuwo miro-dhal ah.
Ra’iisul wasaaraha oo isaguna hadlay ayaa sheegay in midnimada Soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah, balse ay ogol yihiin inay sameeyaan wax kasta oo keeni kara in la deeyo dhibaatada laga tabanayo dhankooda.